कुन नेताको योग्यता कति ? || Postpati : News For All
पोष्टपाटी २०७६ असार २१, शनिबार प्रकाशित पढ्न लाग्ने समय : 10 मिनेट
असार २१, काठमाडौं। वनमन्त्री शक्ति बस्नेत मन्त्रालयको व्यस्त दैनिकीसँगै यतिबेला आफ्नै परीक्षाको तयारीमा छन्। राजनीतिशास्त्रको स्नातकोत्तर (एमए) का लागि मन्त्री बस्नेतले अहिले परीक्षा दिइरहेका छन्। बानेश्वरस्थित गोल्डेन गेट कलेजबाट उनले ‘तेस्रो पेपर’ को परीक्षा सकाए। अझै दुइटा विषयको परीक्षा बाँकी नै छ। राजनीतिशास्त्रमै स्नातक बस्नेत स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययनले अझ बढी राजनीतिमा निखार ल्याउने उद्देश्यले अध्ययनमा लागेका हुन्, यो समाचार रामकृष्ण अधिकारीले अन्नपुर्ण पोष्टमा लेखेका छन्।
हाम्रा नेताहरूका व्यवहार बोलीमा अहंकार झल्किन्छ। युरोपको पुनर्जागरण कालदेखि यताका सबै हेर्दा अज्ञानीको एउटा सानो झुन्डले शासन व्यवस्थालाई नियन्त्रण गरिरहेको छ। अझ नेपालको सन्दर्भमा भन्दा नेपालले सही बाटो किन पक्डिन सकेनभन्दा अपवादमा बीपी कोइराला जस्ता पात्र पैदा भए। तर यति धेरै अज्ञानीको झुन्ड देखियो कि उहाँलाई पनि काम गर्न दिइएन। पछिल्लो ७०/८० वर्षको इतिहास हेर्दा बीपी जत्तिको उचाइ, ज्ञानको सगरमाथा तथा सिम्बोलका रूपमा रहेको राजनीतिज्ञ मैले अरू देखेको छैन। उहाँलाई अज्ञानीले काम गर्न नदिएका रहेछन्। अहिले पनि मैले त्यस्तै देखिरहेको छु। राजनीतिशास्त्रको अध्ययनले त्यही देखाइरहेको छ। गीता, महाभारत, पुराणलगायतदेखि अरू किताब पढियो तर राजनीतिशास्त्र वास्तवमै के हो ? पहिलो भाग नीतिशास्त्रको रहेछ। यो आफैंमा एउटा विज्ञान रहेछ। यसलाई जसरी मानवीय जीवन र व्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने हो देखिएन, राजनीतिशास्त्रको अध्ययनको कमीले पनि यस्तो देखिएको हुन सक्छ। त्यही भएर पनि सिद्धान्त र जीवन व्यवहारमा हामी कहाँ छौं र हामीले अब कस्तो राजनीति गर्ने भन्ने बुझ्नकै लागि राजनीतिशास्त्र पढ्न थालेको हुँ।